Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iiwayini kunye neMimoya » Ifandesi yeWayini ye-Barolo: €600,000 ye-Barolo kwi-Barrel
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Culinary • inkcubeko • lomhleli • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Iindaba zaseSwitzerland eziQhekezayo • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iiwayini kunye neMimoya
Ifandesi yewayini yaseBarolo
Ngamanye amaxesha isiganeko sisiganeko nje, kwaye ngamanye amaxesha (xa ndinethamsanqa) isiganeko sijika sibe ngamava amnandi emva kwemini ngoMgqibelo olungileyo ngokwenza okulungileyo.
Kutsha nje, bendimenywe kwiBarolo en primeur e-Il Gattopardo (kunye ne-Zoom simulcast evela kwiNqaba yaseGrinzane Cavor ePiedmont, eItali). Lo mnyhadala wawukwajongwe eJamani, eSwitzerland, nase-UK, ngokubambisana neBhodi yabakhenkethi yaseLanghe Monferrato Roero. En Primeur yinkqubo yokuthenga ethandwayo e Bordeaux apho kuthengiswa khona iwayini kwaye zithengwe ngelixa zisezikhulile kwimigqomo kwaye zihanjiswe kumthengi ekupheleni kwenkqubo (le ndlela yokuthengisa ayizange idume ngaphandle kweGironde).
Lo msitho unike abaqokeleli iwayini ithuba elingazange libonwe ngaphambili lokuthatha inxaxheba kwiphulo lokunceda abantu abasweleyo kunye nabaqokeleli bewayini. Abafaki zicelo eziphezulu kwii-barriques yaseBarolo (2020 zakudala) kwipasile ethile kwimbali yediliya yafumana iwayini kunye namalungelo okuqhayisa anxulumeneyo.
Enye injongo yayikukuqaqambisa ukuntsonkotha kwezinto ezahlukeneyo ezenza imbali yaseGustava Vineyard (ukuza kuthi ga ngoku iwayini ibingekafakwa ebhotileni njengohlobo oluzimeleyo). Abona bathengi baphezulu baphumelele ibhari yewayini eyenziwe ngeediliya zeBarolo Nebbiolo, evunwe ngo-2020, kwimbali yeCascina Gustava Vineyard, eFrinzane. Xa iwayini igqibezela inkqubo yokuguga (ngo-2024) i-barrique nganye iya kukhupha iibhotile ezimalunga nama-300, eziya kufakwa ebhotileni kwaye ziphawulwe ngeleyibhile eyenziwe ngokukodwa ligcisa uGiuseppe Penone. Imarike ekujoliswe kuyo kwifandesi? Iingcali zewayini eziphezulu, kuquka abaqokeleli bewayini, abathengi kunye nabathengisi.
INebbiolo yayikhuliswe ePiedmont kwangenkulungwane ye-14. Umdiliya ufika kade ukuvuthwa kwaye wonakaliswe lula yimozulu embi; nangona kunjalo, ekubeni isenza iwayini ebomvu enevumba elimnandi nenamandla, ixatyiswa kakhulu. IBarolos kufuneka ibeneminyaka emithathu ubuncinci, emibini ubuncinci emaplangeni, ivelise iwayini enetannic kwaye yomelele kwaye idla ngokudinga ubuncinci iminyaka emihlanu ukuze ithambe ibeyi wayini entsonkothileyo, yomhlaba.
IBarolo ithathwa njengelinye lawona magama abalaseleyo ewayini eItali kwaye iingcaphephe ezininzi ziyithatha njengeyona ibalaseleyo yokwenza iwayini eItali. Ezinye ii-oeniphiles zibhekisa kuBarolo njengeKumkani yeewayini kunye neWayini yeeKumkani, kude kube phakathi kwenkulungwane ye-19, iPiedmont yayiyeyendlu ebekekileyo yase-Savoy, abalawuli bembali basemantla ntshona e-Italiya. I-Savoys ithande i-Nebbiolo kunye ne-Barolo DOCG ibandakanya ii-communes ezili-11, kuquka idolophu yaseBarolo.
Kukho iihektare ezingama-4200 kwigama kwaye ukusukela ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19, abalimi bazamile ukuchonga ezona zidiliya zabo. I Barolo COCG ifuna ukuba iwayini zibeyi 100 pesenti ye Nebbiolo, umdiliya ocingwa njenge Pinot Noir yase Italy.
Kunika umdla ukuqaphela ukuba iGrinzane ayinambali yokuvelisa isidiliya esinye esahlukileyo iBarolos kwaye uninzi lweziqhamo lusetyenziswe kwiBarolos exutyiweyo. Iingcaphephe zifumanisa ukuba iNebbiolo iyakwazi ukusasaza intsingiselo yendawo kwaye inamandla abalaseleyo okuma yedwa. Zonke iiwayini ezikwifandesi zaye zaqinisekiswa kwi-barrique, zichitha iintsuku ezili-10 ukuya kwezi-15 kwiimfele ezinempompo ye-manual kunye ne-punch downs. Ukuvubela kwemalolactic kwenzeka kwimiphanda. Ukuguga kuqikelelwa ukuba kungathatha iinyanga ezingama-24 emaplangeni kwaye kuya kwahluka ngokwe wayini.
U-Antonio Galloni (umgxeki wewayini kunye ne-CEO yeVineous) ulungelelanise inkqubo eNew York kwaye wadala i-NFTs (iimpawu ezingabonakaliyo) kwi-barriques nganye ye-15, uhlobo lwesatifikethi sedijithali esiqinisekiswe yi-blockchain. Uzalelwe eVenezuela, uGalloni waziswa ngewayini esemncinci kakhulu njengoko abazali bakhe babengabathengisi bewayini baseTaliyane kwaye utatomkhulu wakhe wayezithanda iiwayini zaseBordeaux, Burgundy naseRhone. UGalloni wabhala amabali akhe okuqala eBurgundy naseBordeaux kwiklasi yakhe yamabanga aphakamileyo yesiFrentshi.
UGalloni wawongwa nge-MBA kwi-MIT Sloan School of Management. Ngo-2003 waqala incwadana yeendaba egxile kwiiwayini zasePiedmont, ezisa ubomi bokuntywiliselwa ngokupheleleyo kwiwayini yase-Italiya. UBarolo wamchulumancisa kangangokuba waqala iPiedont Report (2004), kwaye iye yaba sisikhokelo esiphambili sewayini zale ngingqi. UGalloni waba ngumgxeki wewayini wase-Italiya ka-Robert Parker ngo-2006 kwaye ngo-2013 waqala iVinous.
E-Italy, umcimbi wawubanjwe ngu-philanthropist, u-Evelina Christillin, uMongameli weMyuziyam ye-Antiquities Foundation yase-Egypt (iTurin), kunye noMongameli wangaphambili we-ENIT (Ibhodi yezoKhenketho zikaRhulumente waseNtaliyane). Wadityaniswa nomsasazi wefandesi, uValeria Ciardiello, intatheli yase-Italiya kunye noCristiano De Lorenzo, uMlawuli we-Christie's Italia, owayephethe ifandesi ephilayo.
Ifandesi yayilawulwa yifandesi kaChristie, e-Italiya...ngenyathelo elingaqhelekanga, abazange bazamkele iikomishini zabo zesiqhelo ukuze kuxhamle imibutho yesisa.
I-barrique nganye itsale ubuncinci bexabiso le-30,000 yee-Euro, ivelisa malunga nama-300 eebhotile ze-Barolo ezineenombolo ezineleyibhile eziyilwe ligcisa elidumileyo lase-Italian kunye nomkroli, u-Giuseppe Penone owaziwayo ngemizobo yakhe emikhulu yemithi eqaphela ikhonkco phakathi komntu nendalo yendalo.
Imveliso yewayini kulo msitho yayiphantsi kweliso likaDonato Lanti i-ENOSIS Maraviglia Laboratory.
IKomiti yokuLawula iNzululwazi yayinosihlalo nguMatteo Ascheri, uMongameli we-Consortium yoKhuseleko lweBarolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani, ngokuthatha inxaxheba kukaVincenzo Gerbi, uProfesa Emeritus weYunivesithi yaseTurin kunye noVladimiro Rambaldi, uMlawuli oyedwa we-Agenzia di Pollenzo, Sp. A, kunye nentsebenziswano yomphandi u-Anna Schneider (iBhunga loPhando leSizwe- Iziko loKhuseleko oluZinzileyo lweZityalo).
Ophumeleleyo (abaphumeleleyo) beBarolo Barriques
Mnye kuphela umniki-maxabiso waseMelika ophumeleleyo; uninzi lwezithintelo zathengwa ngabaqokeleli eYurophu. Lilonke, ifandesi inyuse ngaphezulu kwe-600,000 yee-Euro ngeqashiso lomntu ngamnye elithatha malunga nama-30,000 ukuya kuma-50,000 eeuros lilinye.
Elona xabiso liphakamileyo le-140,000 yee-Euro likhusele ekuphela kwe tonneau kwinkqubo, indawo enkulu yewayini elingana neebhotile ezingama-600 zeBarolo de Commune di Grinzane Cavour 2020 eyongezwe ngokungalindelekanga ekupheleni kwefandesi ngusekela mongameli weCassa di Risparmio. di Cuneo Foundation, Ezio Raviola.
Ibhidi ye-50,000 ye-Euro kwi-Barolo No. 10 barrique yazuza i-Adas Foundation (inzuzo engenzi nzuzo ebonelela ngolawulo lweentlungu, inkxaso yengqondo kunye nokunyamekela kwe-palliative ekhaya). Ngokomgxeki uGalloni, "yenye yezona wayini zinomdla kule fandesi..."
Abaxhamli befandesi baquke ne-Alta Langa Cultural Park ngeenkqubo zabo zenkcubeko/zokhenketho; I-Augusto Rancilio Foundation yesifundo/uphando kulwakhiwo, ukuxhasa abantu abatsha kunye nokungena kwabo kwihlabathi lezemisebenzi kunye nokubuyiselwa kwendawo yokuhlala yenkulungwane ye-17, kunye nenkxaso yaseHong Kong exhasa iinkedama kunye nabakwishumi elivisayo abakhulelweyo.
Abaququzeleli beminyhadala bacebisa ukuba iBarolo En Primeur yokuqala (eyaziwa ngokuba yi “edition zero”) iya kuba sisikhokelo sexesha elizayo, kwaye mhlawumbi, abanye abavelisi beBarolo bazakufaka isandla kwiiwayini zabo kwezinye iziganeko ezifanayo.
Mario masciullo uthi:
NgoDisemba 5, 2021 kwi-12: 16
Molo Juergen, eli nqaku linomdla kakhulu lifanele ukusasazwa e-Itali.
Ndingayifumana imvume kuGqr E.Garely ukuba ndiqhubeke?